सहिदलाई सम्झने परिवारमात्रै ! | नेपालको सम्झना
Browse » Home » खबर सेरोफेरो » सहिदलाई सम्झने परिवारमात्रै !
सहिदलाई सम्झने परिवारमात्रै !
जनआन्दोलनमा सुरक्षाफौजको गोली लागी मृत्यु भएका पर्वतका सहिद गोविन्दनाथ शर्माकी श्रीमती भगवती शर्मा शनिबार लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको श्रीमान्को सालिकमा माल्यार्पण गर्दै । भर्‍याङ समाउँदै गोविन्दनाथका भाइ देव शर्मा -सेतो लुगामा) ।
पर्वत, वैशाख ११ -
सहिद गोविन्दनाथ शर्माको सालिक रहेको लोकतान्त्रिक चोक लोकतन्त्र दिवसकै दिन शनिबार सुनसानजस्तै देखिन्थ्यो । चोकमा भेला भएका केही सर्वसाधारण २०६२/६३ को आन्दोलनको समीक्षा गर्नमा व्यस्त थिए । विभिन्न्ा संघसंस्थाको सहयोगमा निर्मित सहिद शर्माको सालिकतिर कसैले ध्यान दिएन । सालिक फुस्रो र उदांगो बनेको थियो । राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत काममै व्यस्त थिए ।
शर्माका परिवार भने सहिदलाई सम्झी कोही सालिकमा आएर श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्छ कि भन्दै बिहान ७ बजेदेखि चोकमै प्रतीक्षारत थिए । तर ११ बज्यो कोही आएनन् ।
त्यसपछि श्रीमती भगवती, भाइ देव र आफन्तले पालैपालो सालिकमा माल्यार्पण
गरे । 'मर्ने बेलामा तिम्रो साथ दिने धेरै थिए तर आज साथ दिने र सम्झने हामी परिवार मात्रै भयौं,' सालिकमा माल्यार्पण गर्दै श्रीमती भगवतीले भनिन्, 'तिम्रो रगत र बलिदानले सही निकास पाएन । न त संविधान बन्ने भो, न त नेताहरू मिल्ोर देश चलाउने नै भए । त्यसैले तिमी सपनामा आएर सुतेका नेतालाई ब्युँझाई संविधान लेख्न लगाऊ ।'
माल्यार्पण गर्न सालिकमा चढेकी शर्माले नेताहरूले कुर्सीको खिचातानी नछाडुन्जेल सपनामा आएर खबरदारी गरिरहन सहिद श्रीमानलाई आग्रह गरिन् । निकै भावुक देखिएकी शर्माले सबै दलका नेता सहिदका सपना पूरा गर्न नलागेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनै व्यस्त भएको आरोप लगाइन् ।
५१ वर्षको उमेरमा सहिद भएका शर्मा दर्जन बढी संघसंस्थामा आबद्ध थिए । उनका दुई श्रीमती, एक छोरा र पाँच छोरी छन् । आन्दोलनमा होमिएका बेला ०६३ वैशाख ८ गते सुरक्षाफौजले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका उनको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचारको क्रममा १२ गते मृत्यु भएको थियो ।
राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र नागरिक समाजले लोकतन्त्र दिवससम्म पनि सम्झने नगरेको भाइ देव शर्माले बताए । उनका अनुसार शर्माको पुण्यतिथिमा उद्योग वाणिज्य संघले श्रद्धाञ्जलिसभा गर्दै आए पनि अरूले कुनै किसिमका कार्यक्रम गरेका छैनन् । शर्मा जनआन्दोलनमा धौलागिरि अञ्चलकै
एक मात्र सहिद हुन् ।
सरकारले शर्माका छोराछोरी र श्रीमतीलाई मासिक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । तर आर्थिक सहयोग गरेरमात्र सहिदको सपना र सरकारको दायित्व पूरा नहुने शर्मा परिवारको भनाइ छ । 'सहिदको रगत पैसामा तुलना गरेर पुग्दैन,' भाइ देवले भने, 'सहिदका नाममा विभिन्न कार्यक्रम र पार्टीपौवा तथा विद्यालय पनि स्थापना गरिनुपर्छ ।' 'दाइले ज्यान नदिएको भए आज यसरी सबैले लोकतन्त्रको छायामा बसी सुखसँग जीवनयापन गर्न पाउने थिएनन्,' उनले भने । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजले सहिद दिवस र लोकतन्त्र दिवसमा सहिदलाई नसम्भिmई उनीहरूको योगदानबारे भुल्ने गरेको उनले बताए । सहिदको सालिकमा माल्यार्पण नगरे पनि उनीहरूको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सही सदुपयोग गर्न सबैलाई भाइ देवले आग्रह गरे ।
'तोकिएकै समयमा संविधान बन्नुपर्छ,' उनले भने, 'समयमै संविधान नबने सहिदले बगाएको रगत व्यर्थ हुने छ ।' श्रीमती भगवतीले लोकतन्त्र दिवसमा समेत कसैले पनि सहिदलाई नसम्झँदा चित्त दुःखेको बताइन् । सहिदको बलिदान भुलेर सरकार र दलहरूले गरेको कार्य पूरा नहुने उनको सुझाव छ ।
Posted by नेपालको सम्झना at 1:29 PM
0 comments to “सहिदलाई सम्झने परिवारमात्रै !”